Falalka Abaabulka ee Dembiyada Culculus - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Falalka Abaabulka ee Dembiyada Culculus
La daabacay måndag 4 juni 2012 kl 12.14
Waxaa kor u kacay magacyada shirkadaha ay liiska madow geliso hayadda kor-meerka dhaqaalaha. Liiska sii dheeraanaya ayaa inta badan ku saleeysan shirkadaha sida aan sharciga waafaqsaneeyn shacbiga ugu halliga iney saami ka iibsadaan, sida laga soo xigtay laanta wararka ee Ekot, mar ay wareeysi la yeelatay ruux ka gaabsaday in magaciisa la faafiyo.
- Waxaa ila soo xiriiray shakhsi luuqadda ingiriiska ugu hadlayay si aad u wanaagsan aad iyo aadna ii qanciyay. Halka uu shirkadda uu ii xayeeysiinayay ku dhoweeyd inay soo saarto qalab casriya ee tekniko ah. Wuxuu ii soo diray qoraallo badan ee aasaas u ah, kuwaasina oo aan fahmay iiguna muuqday kuwo la aamini karo. Waa middaa igu kaliftay inaan miisaaniyad geliyo, sida u unika magaciisa ka gaabsadey sheegay.
Shirkadaha ku dhaqma falalkan khaa'innimada ah ayaa sidoo kale leh bogag aaladda internetka iyo koontooyin sida kuwa bangiyada oo aad xaqiiq moodeeyso.
Hayadda kor-meerka dhaqaalaha ayaa aaminsan in sannadkii ey shirkadaha sidaa ku shaqeeystaa ka dhacaan dadka dhaqaale gaarsiisan lix milyaard e ekoronka iswiidhishka dalka Iswiidhen oo keliya.
Iyadoo ay hayadda kor-meerka dhaqaaluhu sannadkii hore gelisey liiskeeda madow ee shirkadaha, kuwo gaaraya 800 oo shirkadood, iyadoona sannadkan ey ku kordheen qiyaastii 300 oo shirkadood oo hor leh.
Waxaa sidoo kale la sheegayaa in digniinnaha badankood ka yimaadaan waddammo dibadda ah, sida uu sheegay Jan Green oo ka howl-gala hayadda kor-meerka dhaqaalaha:
- Haa, war-bixinnada digniinta ah waa kuwo aannu is dhaafsanno. Waayo kuma eka oo keliya hal waddan shirkadaha khiyaamada ku shaqeeysta, qaarkood waxey ka howl-galaan 25 waddan. Waana dembiyo culus ee la abaabuley, sida uu sheegay Jan Green.